Backless Ostrich Feather Split Hem ကတ္တီပါပါတီ ၀ တ်စုံ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
Backless Ostrich Feather Split ပ ၀ ကတ္တီပါပါတီ ၀ တ်စုံ
$23.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $38.99
အရောင် မီးခိုးရောင် ပန်းရောင် အနက်ရောင်
အရွယ် M L S
မီးခိုးရောင် / M က မီးခိုးရောင် / L ကို ပန်းရောင် / S ပန်းရောင် / M ပန်းရောင် / L အနက်ရောင် / S က အနက်ရောင် / M က အနက်ရောင် / L ကို မီးခိုးရောင် / S က
Backless Ostrich Feather Split Hem Velvet ပါတီ ၀ တ်စုံ - မီးခိုးရောင် / M backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ရာသီ: နွေရာသီ၊ နွေ ဦး၊ ဆောင်း ဦး
ပစ္စည်း: Polyester, ကတ္တီပါ
silhouette: Fit နှင့်မီးတောက်
ပုံစံ: သာမာန်၊ လှပသော Sexy Party Vintage ၀ တ်စုံ
Feature: Chic ငှက်ကုလားအုတ်
50 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
စတိုင်ကျလှပစွာ ၀ တ်ဆင်နိုင်သည်
NG မတိုင်ခင်အားလုံးအကုန်လုံးရောက်လာတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
Платьеоченькрасивое! သင်ကြားပို့ချပေးသည်။ НОмненеподошелразмер! Мна 85-64-91 ကိုကြည့်သည်မှာတကယ့်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်သည်။ (၁၅၇၊ вес ၄၇) အဆင့်ပြန်ဖွင့်သည်နှင့်ငွေပြန်အမ်းငွေပြန်ပေးလိုက်သည်။
မီးကိုဝတ်ဆင် !!!! ရွာဟာလက်အိတ်လိုပါပဲ။ ငါတကယ်နှစ်သစ်ကြိုကြိုတင်ကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ထိုအားလပ်ရက်ပြီးနောက်သာရောက်လေ၏။ သို့သော်၎င်းကိုဝတ်ဆင်ရန်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။ ထည်ကသာယာတယ်၊ အမွေးတွေလည်းရှိတယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကပြွန်ထဲရှိ tyutelka ၏ပုံပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်အောက်တွင်ချုပ်နေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
ဖောက်သည် 5.0 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 72293 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။